Fans of cuisine Italy uyatholakala kuwo wonke amazwe. Lokhu akusona isimanga, ngoba ingeyesizinda pasta yakhe eyingqayizivele futhi lasagna, pizza elula kodwa esihlwabusayo ngakho, kanye nezinye izitsha eziningi. Futhi ukuze azizwe ethandwa ukunambitheka, akudingekile ukuya Italy - imikhiqizo ezidingekayo zingatholakala ekhaya. Ngokwesibonelo, ungazama ukuthola ukuthi kunani lasagna ngakho okuhle. Kuyini lokhu? izingqimba eziningana inhlama ezazigxishwe inyama noma nemifino sikadali, abafafazwe ushizi wabhaka kuhhavini nge sauce.
Kuyini lokhu? Okokuqala sifundile ngalokhu dish, Isimanga siwukuthi, hhayi abaseRoma, namaGreki. Bafunda indlela ukubhaka flat round amakhekhe, senziwe ngofulawa kakolweni, okwakubizwa ngokuthi i laganonom. iresiphi yabo kudluliselwa amaRoma, wona waqala ukunqinda isinkwa zibe emapheshana. Kwezinye izifunda Italy njengoba zilondoloza elithi "Lagana", okuyinto okukhulunywa pasta ububanzi, eyaziwa ngokuthi tagliatelle. Kwezinye izindawo zase-isidlo ekugcineni siguqulelwa lokho manje ethandwa emhlabeni wonke. Kuyathakazelisa ukuthi ukuvikela ilungelo ukuze yasungulwa lasagna bazama Scandinavians waseBrithani. Kodwa amaNtaliyane uqiniseka - ungcono kubo, awukwazi ukuthola noyedwa. Nokho, Neapolitan lasagna, inyama nokunomsoco, langa ngempela. Zama ukupheka ke wena ukukubona!
lasagna Classic nge Bolognese
Ukuze silungiselele lokhu dish uzodinga balukhulume ezimbili Italian sauce Bolognese -beshamel. Futhi uzodinga ukuthola ishidi ekhethekile, okuyinto ezakha lasagna. Kuyini lokhu? Empeleni, lesi sakhiwo pasta engavamile, amaqebelengwane empuphu ecolekileyo kakolweni, ngezinye izikhathi ezidinga ukupheka, futhi ngezinye izikhathi cishe ngomumo. Ngakho, udinga amane amagremu ibhotela isipuni amafutha, tincetu ezintathu ubhekeni, anamanci mathandathu amagremu kaHamu - amaNtaliyane uncamela prosciutto ezihlukahlukene onion, izaqathe ezimbili ezincane, ambalwa isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi ukhipha izingongolo, amagremu amabili namashumi amathathu of yenkomo nengulube ithole esifanayo, eziyikhulu amagremu yengulube inyama, inkukhu umhluzi ingilazi kanye ingilazi yewayini elimhlophe, amabili izinkomishi utamatisi oqotshiwe, clove, amakinati, umbhangqwana inkomishi amanzi ashisayo, amagremu amathathu namashumi amane amakhowe fresh, ezimbili inkukhu kwesibindi, parsley fresh, polstaka eliphakeme amafutha ukhilimu, usawoti, pepper. Konke lokhu - izithako ekuzaliseni futhi sauce béchamel thatha ezintathu wezipuni ibhotela, ezintathu wezipuni kafulawa, amabili izinkomishi ubisi olufudumele, inkomishi weparmesan. Futhi ungakhohlwa cishe lasagna. Ngakho Bolognese - ke ukuthi ungaqala kanjani ekhuphuka. Kuyini lokhu? Ukuqina inyama sauce nge imifino. Ncibilikisa ibhotela, engeza amafutha omnqumo, prosciutto futhi ubhekeni. A ngomzuzu olandelayo, benqabe ekushiseni ongaphakeme, futhi indawo epanini oqoshiwe imifino. Lapho athambe, engeza zonke ukugxusha. Govuza gazinga kuze kuphekwe. Thela iwayini pan ne umhluzi, ngilithole emizuzwini eyishumi Beka utamatisi kanye nezinongo, engeza amanzi. Imizuzu imizuzu engamashumi amane bese wengeza amakhowe, iparsley isibindi, bese ukhilimu kanye pepper kanye nosawoti.
Ukuze béchamel, Ncibilikisa ibhotela epanini, engeza ufulawa ugovuze kuze kube uqweqwe iba nsundu. Kancane kancane uthele ubisi alethe ingxube kuze kube uqweqwe. Bilisa amaphepha lasagne, wafaka isidlo ukubhaka, promazyvaya ngamunye ungqimba basting inyama sauce bechamel, ushizi lekufafazweni, ungqimba wokugcina ugcwalise kuphela bechamel ufafaze uwoyela. Bhaka cishe isigamu sehora ngaphambi kokukhonza, nika isidlo epholile kancane.
Buckwheat ku Izigodlo: ukupheka ongakhetha ukudla
Indlela ipea iphalishi kusuka chef yokudlela.
Isinkwa nge uju namantongomane. ukupheka zokupheka
Izinhlobo blood pressure ngabaqaphi
Indlela ukupheka pancake okumnandi ku curdled?
Yekuchumana sendlela ukushintsha ngemuva kule "VC"
Kuyini ijazi ngesikhumba semvu?
Indlela zivuleka ekhaya futhi ukuthi imishini zemidlalo kwakudingeka lokhu?